Vivo APEX ma tusaale u tahay in lagu daydo Apple iyo iPhone-keeda iyo iPads-ka mustaqbalka? | Wararka IPhone
Vivo APEX tusaale ma u tahay inay ku daydaan Apple iyo iPhone iyo iPad mustaqbalka?
Hadaadan wali maqal arinkaas, dhacdadii ugu muhiimsanayd ee moobilka sanadka waxaa lagu qabtaa magaalada Barcelona. Dhab ahaan: Shirweynaha Mobilka Adduunka wuxuu soconayaa illaa bisha Maarso ee soo socota. Waxaan awoodnay inaan aragno sida noocyada hoggaamineed u soo bandhigeen seeftoodii ugu horreysay (Samsung ama Sony, tusaale ahaan). Si kastaba ha noqotee, noocyo kale ayaa kaqeybgalayaasha kaqeyb galiyay hal-abuurnimadooda. Midkood wuxuu ahaa Vivo iyo qaabkeeda Waxaan ku noolahay APEX.
Este smartphone in shirkadda asal ahaan Hindidu soo bandhigtay ay tahay uun fikrad. Laakiin waxay u furtay qaar ka mid ah albaabada xalka suurtagalka ah sii deynta mustaqbalka. Iyo iyaga dhexdooda, iPhone-ka soo socda. Maxaa gaar ah oo ku saabsan Vivo APEX-kan? Waa hagaag waxa wejigiisa wejiga hore waxaan ka helnaa shaashadda oo keliya, wax intaa dhaafsiisan. Ka dibna, sidee u xalliyeen arrinta goobta walxaha kala duwan ee aan inta badan ka helno dhinaca hore? Tani waa halka ay ku cusub tahay shirkadda.
In kasta oo iPhone X yahay shaashad iyo walxo muhiim u ah sida "Guriga" badhanka loo tirtiray si loogu sameeyo teknolojiyad cusub oo lagu garto wajiga (ID ID), haddana waxaa jira cunsurro aan si buuxda u qabsan. Waxaan tixraaceynaa "Notch", suniyahaas aan kor ku heyno oo leh dareemayaal kala duwan iyo kamarada cusub ee TrueDepth. Xaaladdan oo kale, Vivo APEX waxay noo soo bandhigaysaa xalka xiisaha leh ee kamaradda hore: waa wax laga soo noqon karo oo ku dhex dhuumanaya gudaha taleefanka casriga ah. Kuwii isku dayay terminal-ka faallo in inkasta oo farsamadu ay tahay mid farsamo, dareenku waa mid xoogan. Haddaba, xalkani ma sii socon doonaa? Waxaa laga yaabaa in kooxaha si aad u goos goos ah u adeegsada kamaradda ay guul u noqon karaan. Tani waxay caqabad ku noqon doontaa iPad-ka, tusaale ahaan.
Dhanka kale, Qeyb kale oo ka mid ah Vivo APEX oo sidoo kale la jeclaaday waa akhristaha sawirka faraha isku dhafan ee shaashadda. Laakiin iska jir, maxaa yeelay astaamaha cusub ee shirkaddu waxay u fududeynayaan adeegsadaha adeegsigiisa. Sababta Hagaag, maxaa yeelay kala bar shaashadda hoose waa akhriste oo dhan. Sidan oo kale, isticmaaluhu uma baahna inuu fiiro gaar ah u yeesho aagga shaashadda uu farta saaro; inta ay ku jirto dhexda dusha sare ayaa ku filan. Tani ma noqon laheyd ikhtiyaar kale oo Apple ay tixgeliso? Iyo baaritaanka timirta ah ee buuxa oo dhan dusha iPad-ka?
Si kastaba ha noqotee, dhammaantood maahan xal wanaagsan. Hadday run tahay inay shaqeynayaan, laakiin xalka la siiyay ee ah in aan la dhexgalin af hayeenka dhegaha ee Vivo APEX ayaa maray farsamooyin birqaya shaashadda si ay ugu shaqeyso hage dhawaaqa iyo inay dhageysato wadahadalka. Marka loo eego dareenka ugu horreeya, ma gaarto tayada hab dhaqameed, laakiin si buuxda ayey u shaqeysaa. Kee ka mid ah teknoolojiyaddan cusub ee aad ku biirin lahayd kombiyuutarada Apple?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Vivo APEX tusaale ma u tahay inay ku daydaan Apple iyo iPhone iyo iPad mustaqbalka?
Apple wuxuu kireeyaa kiiska loogu talagalay Apple Watch oo leh lacag la'aan wireless
Samsung waxay dib u dhigeysaa soo saarista afhayeenka caqliga leh si ay ula tartanto HomePod